Gudiga Arimaha dibada ee Baarlamaanka Soomaaliya oo Dowlada Turkiga kadalbaday siideynta Fanaanad caan ah oo Turkiga ku xiran |
Gudiga Arimaha dibada ee Baarlamaanka Soomaaliya oo Dowlada Turkiga kadalbaday siideynta Fanaanad caan ah oo Turkiga ku xiran
Xildhibaan Pro. Maxamed Cumar dalxa oo ah Gudoomiyaha Gudiga arimaha dibada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay tahay arin aad looga xumaado in ay fanaanad Soomaaliyeed xilligaan ku xiranaato dalka Turkiga oo Soomaaliya saaxiib dhaw la’ah.
Qamar cabdullaahi Haraawe oo ah fanaanad Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku xirantahay Turkiga iyagda oo Xildhibaan Dalxa uu Turkiga ka codsaday in ay u soo celiyaan xuriyadeda.
“Turkiga waa in ay soo daayan Fanaanada Qamar cabdullaahi Harawe. Waxaas waxa ay wiiqayan xariirka labada dal. Sida aan u ilaalineyno xariirka labada dal waa in Turkiguna u ilaaliyo”, Maxamed Cumar Dalxa Gudoomiyaha gudiga arimaha dibada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidaa warbaahinta u sheegay.
Fanaanadaan oo xoriyadeeda ay kaqaadeen ciidamada amaanka Turkiga ayaan wali lasheegin waxa ay sababasatay hasa yeeshee waxa ay qeyb kanoqoneysaa mawaadiniin Soomaaliyeed oo xabsiyada dalalka caalamka ugu jira sababo aan lagaraneyn.
Lama oga sida Turkigu uga jawaabo codsiga Maxamed Cumar Dalxa Gudoomiyaha gudiga arimaha dibada baarlamaanka Soomaaliya.